အားလုံးစက်ဘီးအကြောင်းကို, အောက်တိုဘာလ 2021
အမှီအခိုကင်းသည့်စက်ဘီးဘောင်တည်ဆောက်သူများ - အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
စိတ်ကြိုက်စက်ဘီးဘောင်ဘယ်လောက်ကျလဲ။ မင်းပြောချင်တာကဒီထုံးစံအတိုင်းစက်ဘီးတွေဟာကာဗွန်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒီစျေးနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ ဒါကမှန်ပါတယ်၊ ထုံးစံအတိုင်းကာဗွန်ဘောင်ကသင့်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပြန်ပေးလိမ့်မည်။ - $ 6000 ။ သို့သော်သတိရရမည့်အချက်တစ်ခု - စတော့ဘောင်များစွာရှိသည်
Becky connor - ကိစ္စရပ်များမှတုံ့ပြန်မှု
အဘယ်ကြောင့် Becky လဲလှယ်လျက်ရှိသည်?
သော့ခတ်ထားသောစက်ဘီး - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
သင်ဘယ်လိုဆိုင်ကယ်သော့ခတ် unjam? ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်ကသူတို့ကို WD-40 နဲ့လျှော့ပေးဖို့ပါ။ သော့ခတ်ထားပါ၊ သော့သည်ကြမ်းပြင်သို့မျက်နှာမူနေပြီး WD-40 ကိုအပေါက်ထဲထိုးထည့်ပါ။ ဤသည်မည်သည့်လမ်း gunk ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သော့ခတ်ယန္တရားကနေယိုစီးခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ထို့နောက်စက်ဘီးသော့ခတ်ထားပါကအပေါက်သည်အထက်သို့မျက်နှာမူ။ သော့ကိုထည့်ပါ။
အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်လျှပ်စစ်စက်ဘီး - ပြissuesနာများမှတုံ့ပြန်မှု
လျောက်ပတ်သောလျှပ်စစ်စက်ဘီးမည်မျှကျသင့်ပါသနည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးများသည်ဒေါ်လာ ၆၀၀ မှ ၈၀၀၀ ကြားအထိကုန်ကျနိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော ebike များကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်ဖြင့်မဝယ်နိူင်ပါ။ အဓိကခေတ်မီအီကွေကာများမှာဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မှ ၄၀၀၀ ကြားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအချက်အလက်များ၏ ၈၀% နီးပါးသည် MSRP ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ အောက်တွင်ရှိသည်။
Huffy ကုန်းဆင်းစက်ဘီး - ပြီးပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
Huffy စက်ဘီးသည်တောင်တက်ခြင်းအတွက်ကောင်းပါသလား။ ထို့ကြောင့် Huffy Mountain စက်ဘီးများသည်အစပြုသူများနှင့်တောင်တက်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံရှိသောမြင်းစီးသူများသည်ပိုမိုခေတ်မီသောစက်ဘီးကိုဆိုင်းထိန်းစနစ်အပြည့်ဖြင့်လိုချင်ဖွယ်ရှိသည်။
အမျိုးသမီးများက de ပြင်သစ်ခရီးစဉ်
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးများစာရင်း - မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
Tour de France ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စီးလို့ရမလား။ Elite အမျိုးသမီးစက်ဘီးစီးသူများသည်လာမည့်နွေရာသီတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစက်ဘီးပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ ထိုစဉ်တွင် Tour de France သည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် များမှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမျိုးသမီးဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားလမ်းကြောင်းကိုစီးနင်းခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်အရာရှိများကိုသူတို့ကိုစက်ဘီးစီးသည့်သရဖူတွင်ထည့်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည် ။17 июн။ 2021 г.
Chris King နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Chris King နားကြပ်များကျိုးနပ်ပါသလား။ ငါ King ပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်ငွေပိုပေးရမယ်။ ၎င်းသည်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးရှိပြီးယူအက်စ်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပိုငွေကို ပေး၍ အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောငွေနှင့်အစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ ထိုအရာကလွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းခရီးသွားလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ creaking နှင့်အတူ King headset များတွင်ပြproblemsနာအချို့ရှိခဲ့သည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန် - ဘုံမေးခွန်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သံသရာလည်ရန်အဆင်ပြေပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း၌စက်ဘီးစီးရန်အန္တရာယ်ကင်းသည်၊ သင်၏ဆရာဝန်ထံမှ OK ကိုသင်ရရှိပါက OB-GYN နှင့်အသိအမှတ်ပြုကိုယ်ရေးကိုယ်တာသင်တန်းနည်းပြ Brittany Robles ကပြောသည်။
အပတ်စဉ်ရည်မှန်းချက်များ - ဘုံမေးခွန်းများ
နေ့စဉ်ပန်းတိုင်အချို့ကားအဘယ်နည်း။ ၁၄ ရိုးရှင်းသောနေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ပျော်ရွှင်သော၊ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဘဝကို ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်လိုအပ်သည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ခုခုကိုရေးပါ။ သင့်မိခင်နှင့်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ သုံးပါ။ သင်၏စားပွဲမှထပြီး ၂ နာရီတိုင်းဆန့်ပါ။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများမေးပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ပါ။ နေ့စဉ်စာအုပ်မိနစ် ၃၀ ဖတ်ပါ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့ခြေထောက်ကိုရိတ်လိုက်ရင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အားကစားသမားအတော်များများဟာစက်ဘီးသမားနဲ့ရေကူးသမားတွေအပါအ ၀ င်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကာယလေ့ကျင့်သူများသည်သူတို့၏ခြေထောက်များကိုလည်းရိတ်သိမ်းကြသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ခြေထောက်ရိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဂရုပြုသင့်သည် ။23.02.2021
စက်ဘီးဘရိတ် pads ကိုအစားထိုးတဲ့အခါ
စက်ဘီးဘရိတ် pads ကိုအစားထိုးတဲ့အခါ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ
စက်ဘီးဘရိတ်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ စက်ဘီးဘရိတ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ သင်၏စက်ဘီး၏ဘရိတ်ဘောင်၏သက်တမ်းသည်အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဘရိတ်အုပ်သည်မိုင် ၅၀၀၀၀၀ အကြားကြာရှည်နိုင်သည်။
အဓိကနာကျင်မှု - ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
အဓိကနာကျင်မှုကိုဘယ်လိုသက်သာစေသလဲ။ ဝမ်းဗိုက် strainCold ကုထုံးကိုကုသနည်း။ အအေးမိကုထုံးကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ခြင်းသည်သွေးထွက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကိုသက်သာစေသည်။ အပူကုထုံး။ အပူကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ကြွက်သားများကိုသက်သာစေပြီးနာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်တင်းမာမှုကိုသက်သာစေသည်။ Over-the-counter (OTC) နာကျင်စေသောဆေးများ။ ချုံ့။ အနားယူနေသည် လေ့ကျင့်ခန်း။
Mongoose အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းမှု - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Mongoose သည်အဆင့်မြင့်စက်ဘီးစီးပါသလား Mongoose စက်ဘီးကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စက်ဘီးတစ်စီးအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည် ။17 янв။ 2021 г.
ရှည်လျားသောကြားကာလ - အရေးယူ -oriented ဖြေရှင်းချက်
ရှည်လျားသောကြားကာလကဘာလဲ ရှည်လျားသောကြားကာလလေ့ကျင့်မှုသည်အားကစားသမားသည်မြင့်မားသောပမာဏပမာဏရှိသောအချိန်များဖြစ်ပြီးနောက်တွင်ပိုမိုတိုတောင်းသောအနားယူချိန်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောပမာဏပမာဏသည်များသောအားဖြင့် ၃ မိနစ်နှင့် ၃၀-၆၀ စက္ကန့်တိုသောငြိမ်သက်မှုကာလအထိကြာရှည်သည်။
စက်ဘီးစီးခြင်း - သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်သလဲ
စက်ဘီးစီးခြင်းကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလုပ်သလဲ။ ပုံမှန်စက်ဘီးစီးခြင်းကသင်၏နှလုံး၊ အဆုတ်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကသင်၏နှလုံးကြွက်သားများကိုအားကောင်းစေသည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းနည်းလမ်းများ - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
စက်ဘီး၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ? စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပန်းဖြေရန်သို့မဟုတ်အားကစားအတွက်စက်ဘီးကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွက်အကောင်းဆုံးထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။
စက်ဘီးစီးခြေအိတ်အရှည် - သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ
trx ab လေ့ကျင့်ခန်း
Trx ab လေ့ကျင့်ခန်း - မည်သို့အခြေချရန်
TRX သည်အဓိကကြွက်သားအတွက်ကောင်းပါသလား။ ကျောက်စိုင်အခဲ core ကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။ ထို့ကြောင့် TRX Suspension Trainer တွင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမဆိုသင်သည်သင်၏ abs, Obliques နှင့် Back-back နှင့်အတူခိုင်ခံ့အောင်တည်ငြိမ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုခုခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ TRX လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏အဓိကကြံ့ခိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်လုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
ပန်းခြံများသံသရာ - လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
ပန်းခြံစက်ဝန်းဘယ်မှာလဲ။ Sherwood ပန်းခြံ၊ ကနေဒါ
ရှုပ်ထွေး carbs လေ့ကျင့်ခန်း post
ရှုပ်ထွေးသော carbs လေ့ကျင့်ခန်း post - ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတာ
လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်စားရန်အကောင်းဆုံး carbs ကဘာတွေလဲ။ အာလူး၊ အစေ့နှင့်သစ်သီးများတွင် quinoa ကဲ့သို့ကောင်းမွန်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များများပါနိုင်သည်။ Quinoa သည် gluten-free ဖြစ်ပြီး pseudocereal အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးများသောအားဖြင့်စပါးအဖြစ်စားသုံးသည်။ ၎င်းသည်အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားပြီးပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသောအပြင်တစ်ခွက်လျှင် ၈.၁၄ ဂရမ်ရှိသည်။
ကနေဒါမှမက္ကဆီကိုသို့စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ - အဖြေတစ်ခု
Stumpjumper vs camber - ပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
နယူးခြေလှမ်းဆိုင်ကယ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
diamondback စက်ဘီးကောင်းပါသလား - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေ
အကြီးတန်းစက်ဘီးစီးသူများ - အဆုံးစွန်သောလမ်းညွှန်
ကောက်ပဲသီးနှံများကျန်းမာသန်စွမ်း - ပြ--နာများကိုတုံ့ပြန်မှု
စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်း - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီဘာသောက်ရမည်နည်း - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Dish ကြိုဆိုအထုပ် 2017 - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
tofurkey ကဘာအရသာရှိသလဲ - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
ကော်လိုရာဒိုဆိုင်ကယ်လမ်းကြောင်းမြေပုံများ - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
ပိုမိုလွယ်ကူသောစမ်းသပ်မှု - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေ
Franco စက်ဘီး - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
ABS အတွက်ယောဂ - လက်တွေ့ကျသောဖြေရှင်းနည်းများ
Ktm ပြိုင်ကားစက်ဘီး - ဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်း
မိနစ် ၃၀ စက်ဘီးစီးခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
လန်ဒန်စက်ဘီးစီးသူ - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
Lebron James ဆိုင်ကယ် - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
2019 tour de france ရက်စွဲများ - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
စမ်းသပ်မှုဒါရိုက်တာကဘာလဲ - ပြည့်စုံသောကိုးကား
ဖလန်းဒါးစ်မှတဆင့်ဖြောင့် - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးတာယာပြုပြင်ကိရိယာ - ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
ကမ္ဘာကြီးကိုစက်ဘီးစီး - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
တစ်စုံတစ် ဦး ကတစ် ဦး စီးနင်းမပေးဖို့ဆင်ခြေ - ဘုံအဖြေကို
Ultralight စက်ဘီးစီးခြင်း - ဘုံမေးခွန်းများကို
George hincapie ဇနီး - ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ဥရောပကျွန်းများ - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်
ဈေးအကြီးဆုံးစက်ဘီးစီးဖိနပ် - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ